Ipropathi enamagumbi okulala ayi-5 eRentières, enombono omangalisayo wentaba, igadi evaliweyo kunye neWiFi
ULoic, Estelle & Co unezimvo eziyi-807 zezinye iindawo.
Le ndawo, ibekwe eRentières, ilungele abakhenkethi abali-12. Inika amagumbi okulala ayi-5, igadi evaliweyo kunye neWiFi.
Indawo yokuphumla ilungele ukuphumla emva kosuku lokuphonononga. Gcoba kwisofa ekhululekile kwaye wonwabele incwadi elungileyo phambi kweziko okanye uthathe ithuba lezinto eziluncedo ezifumanekayo, kubandakanya iWiFi, unomathotholo, iCD player kunye neDVD player.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokwaneleyo ukulungiselela ukutya okuthandayo. Yonwabela isidlo sakho esijikeleze itafile yokutyela ehlala i-14 okanye ngaphandle, egadini okanye ethafeni ukonwabela iimbono zeentaba.
Ipropathi inamagumbi okulala ama-5 atofotofo, i-2 kubandakanya ibhedi enye kunye nebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela labucala elineshawa kunye nendlu yangasese, i-1 kubandakanya iibhedi ezi-2 zangasese kunye negumbi lokuhlambela labucala elineshawa kunye nendlu yangasese, 1 kubandakanya ibhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela labucala. kunye neshawa kunye nendlu yangasese kunye ne-1 kubandakanya ibhedi ephindwe kabini. Indlu yangasese eyahlukileyo iyafumaneka.
Ipropathi ineemveliso zokucoca, umatshini wokuhlamba, izixhobo zoku-ayina, i-vacuum cleaner, ukufudumeza okuphakathi kunye negumbi lokunxiba.
Ukucocwa kokugqibela kufuneka kwenziwe ziindwendwe okanye kunokufumaneka nge-euro eyongezelelweyo eyi-100 ekufuneka ihlawulwe kwisiza. Ilinen yokulala kufuneka iziswe ziindwendwe okanye inokufumaneka nge-euro eyongezelelweyo ye-8 ngomntu ngamnye oza kuhlawulwa kwisiza. Irhafu yabakhenkethi ye-0.7 euro ngomntu ngobusuku iya kufuneka xa ufika. Nceda uze nezakho iitawuli.
Indawo yokupaka iyafumaneka kwindawo (ezinye iintlawulo zinokufakwa). Ukutshaya ngaphakathi akuvumelekanga. Izilwanyana zasekhaya zivumelekile xa zifunwa. Amaqela avumelekile.
Le ndawo yonwabela indawo enethamsanqa eya kukuvumela ukuba ukonwabele ukuhlala kwakho kule ndawo. Izinto ezininzi ezikulindileyo kwindawo ezingqongileyo, ezinje ngeTennis, ukutyibiliza ngeRoller, ukuQubha, ukukhwela intaba, ukuzingela, ukuloba, ukuqabela amatye, ukukhwela intaba ngebhayisekile, ukuHamba, ukukhwela iHashe kunye nokuHamba iBhayisikile. Uya kufumana iibhari ezinkulu kunye neendawo zokutyela kwi-25 km kunye nevenkile enkulu ngaphakathi kwe-12 km. Amathambeka aseStation de Super-Besse akwiikhilomitha ezingama-39 ukusuka kwipropati. Ibala yegalufa i-du Mont-Dore ikumgama oziikhilomitha ezingama-57 ukusuka kwipropati.